CHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- PVC Three Layers Co-extruder Line - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
CHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- PVC Three Layers Co-extruder Line
Suzhou JWELL Machinery Co., Ltd dia hampiseho ny tsipika fantsom-piraisana mpiara-extruder PVC Three sosona ao amin'ny booth H6.1D65, manantena ny fitsidihanao
Ny tsipika dia nampiasa setroka roa mahomby SJZ mpanonta extruders hanao pipa telo sosona PVC. Ny sosona afovoany dia nampiasa fitaovam-pako kalsioma avo na kalsioma avo be an'ny PVC.
Ilay extruder dia nampiasa volo alika sy barika mahatohitra JWELL Ultra-Wear; Mpihinana kambana vita amin'ny kambana miaraka amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy tetezana manohitra vovoka. Ny boaty fananganana fivoriambe mitsangana dia manatsara ny drafitra fanamafisana ny boaty ary ny maripana ankapobeny amin'ny boaty dia mo
ptimised ny famolavolana ny bobongolo telo sosona PVC, miaraka amin'ny fisehoan'ny insulation sy fiarovana anti-perm; Ny làlan-kizorana anatiny dia nohosorana tsara tamin'ny alàlan'ny plating chrome, mitafy mahatohitra ary mahazaka harafesina; Mety ny manala sy
Tavoahangy roa sosona, fifehezana tsy miankina tsy miankina, fanairana tsy misy fangarony haavon'ny banga; Multi-claws haul-off unit, servo drive motor, miantoka ny famokarana mahery vaika hery famokarana, tsy misy indentation ary tsy skidding.
Ny milina fanapahana dia mandray fitaovana fametahana rotary mba hifanaraka amin'ny savaivony fantsom-pandrefesana samihafa ary hialana amin'ny olan'ny fanoloana clamp matetika. Ampiasaina miaraka amina mekanika chamfering float vaovao azo ovaina izy io, dia afaka manitsy ny haben'ny chamfering arakaraka ny haben'ny savaivan'ny fantsona sy ny hatevin'ny rindrina. Fitaovana suction mihidy, tsara kokoa ny vokany.
Console interactive machine-mihetsiketsika olona, ​​fanaraha-maso afovoany feno PLC, misy metatra fampisehoana angovo.
Ny vokatra dia ampiasaina amin'ny fantsom-panafody manaparitaka vovo miaraka amina feon-tseranana avo lenta, ny fantsom-bozaka mihosin-tsofina miaraka amin'ny tsipika boribory amin'ny rindrina anatiny miaraka amin'ny
ADD: NO.18, Dong an Road, Chengxiang Industrial Zone, Taicang, Suzhou City, Sina
HIVERINACHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- LVT Soft Composite Floor Extrusion Line
NEXTCHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- Tsipika mpanangona volo haingana an'ny PVC